यी फल फ्रिजमा राख्दा कति हानिकारक ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
यी फल फ्रिजमा राख्दा कति हानिकारक ?
फलफूल तथा सागसब्जी लगायतका खानेकुरा सड्ने र कुहिने डरले हामी त्यसलाई फ्रिजमा राख्छौ, जहाँ लामो समयसम्म ताजा रहन्छ ।
तर, सबै खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा ताजा नहुने मात्र होइन, त्यसको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यतीमात्र होइन कतिपय यस्ता खानेकुरा छन् जो फ्रिजमा राखेपछि हानिकारक हुन्छ ।
के हुन् ती खानेकुरा ?
आलु फ्रिजमा राख्नु ठीक हुन्न । त्यसो त आलुलाई अन्य स्थानमा पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ । यदि आलुलाई फ्रिजमा राखियो भने त्यो हानिकारक हुन्छ । किनभने यसमा स्टार्च प्रचुर मात्रामा हुन्छ, जो लामो समय फ्रिजमा राख्दा सुगरमा बद्लिन्छ । मधुमेह तथा मोटोपनले ग्रसित रोगीको लागि यस्तो आलु सेवन गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
अहिलेको सिजनमा पाइने फल हो, आँप । आँपलाई ताजा राख्नका लागि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । फ्रिजमा राख्दा आँपमा रहेको एन्टि अक्सिडेन्ट घट्छ । त्यस्तै केरा, स्याउ र आलुबखडा जस्ता फल पनि फ्रिजमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यस्तै खरबुजालाई काटेर फ्रिजमा राख्दा त्यसमा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । महलाई फ्रिजमा राख्दा एन्टिअक्सिडेन्ट समाप्त हुन्छ ।-अनलाइनखबर
6/09/2017 02:42:00 PM